माघ ८, २०७८ ०४:३८:३५
सुनको मूल्य घट्यो, ताेलाकाे कति पुग्याे ? चैत्र २९, २०७७
सुनको मूल्य घट्यो, ताेलाकाे कति पुग्याे ? चैत्र १७, २०७७
सुनको भाउ घट्यो, कति पुग्यो ? चैत्र ६, २०७७
सुनको भाउ ओरालो लाग्यो, आज एक हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ आज तोलामा एक हजार रुपैयाँले घटेको छ । हिजो तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर ८७ हजार ५ सय रुपैयाँमा पुगेको भाउ आज फेरि घटेको हो । फाल्गुन २०, २०७७
सुनको मूल्य घट्यो नेपाली बजारमा आज पहेंलो धातु सुनको मूल्य प्रतितोला १०० रूपैयाँले घटेको छ । पुष २४, २०७७
सुनको मूल्य तोलामा ३ हजार ४ सय घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ मंगलबार सुनको भाउमा उच्च गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज प्रतितोला तीन हजार ४०० रूपैयाँ घटेको हो । सोमबार ९८ हजार दुई सयमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ मंगलबार ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ आईपुगेको छ । यस्तै तेजाबी सुनको भाउ ९४ हजार ३०० रूपैयाँ कायम गरिएको छ । सोमबार तेजाबी सुनको भाउ तोलामा ९७ हजार ७०० रूपैयाँ थियो । यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार २८५ रूपैयाँ कायम रहेको चाँदीको भाउ आज एक हजार २१५ रूपैयाँ कायम गरिएको छ । कार्तिक २५, २०७७
आज पुनः सुनचाँदीकाे भाउ बढ्याे पहिलो साता आइतबारको दिन सुनको भाउ बढेको छ । चैत्र ९, २०७६
लघुवित्त बैंक संघको निर्णय,नयाँ कर्जा लगानी स्थगन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाका लागि नयाँ आवेदन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले बैठक बसी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि भन्दै नयाँ आवेदन रोक्ने निर्णय गरेको हो । चैत्र ९, २०७६
बैंकिङ सेवा नियमित, डिजिटल कारोबार गर्न आग्रह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने बैंकिङ सेवा नियमित गर्ने भएका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु सबैले सबै शाखा कार्यालयहरुका काउन्टर सुचारु राख्ने भएका हुन् । चैत्र ९, २०७६
नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँ २८ पैसा बिक्रीदर तोकेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्चविन्दुमा पुगेको हो । यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । चैत्र ७, २०७६
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन स्थगित निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंको निर्वाचन स्थगित भएको छ । चैत्र ६, २०७६
नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घट्यो!! नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटिएको छ । चैत्र ६, २०७६
आजपनि घट्यो सुनको मूल्य आकासिएको सुनको मुल्यमा गिरावट आउने क्रम जारि छ। साताको पहिलो दिन आज (आइतबार) सुनको मूल्यमा पुनः घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ७८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतबार तोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेर ७७ हजार कायमा भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ७६ हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी पनि आइतबार ३० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ७ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । चैत्र २, २०७६
सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले घट्यो नेपाली बजारमा आज बिहीबार सुनमा एकै दिन ८ सयले घटेको छ । बुधबार ८२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला ८१ हजार ५ सय कायम भएको छ । फाल्गुन २९, २०७६
सुनको भाउ फेरी बढ्यो विहीबार पुनः सुनको भाउ बढेको छ । बुधबार ७५ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको छापावाला सुनसुन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले बढेर आज ७६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ७५ हजार ७ सयमा कायम भएको छ । त्यस्तै, चाँदी पनि आज ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ८ सय ८० रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायि महासंघले जनाएको छ । फाल्गुन १, २०७६
सुनको मूल्य फेरी बढ्यो, नयाँ रेकर्ड राख्यो नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड राखेको छ । शुक्रवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ७६ हजार रहेकाे थियो । आज तोलामा ५ सयले मूल्य बृद्धि भइ प्रतितोला सुन ७६ हजार ५ सय कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ७६ हजार २ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । शुक्रवार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ८ सय ९० रहेको थियो । आज प्रतितोला ८ सय ९५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहको छ ।। माघ १९, २०७६